Maxaa Maanta laga filayaa Gaadiidka vs Heegan, Horyaalka Somalia Premier league | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA - Maxaa Maanta laga filayaa Gaadiidka vs Heegan, Horyaalka Somalia Premier league
Maxaa Maanta laga filayaa Gaadiidka vs Heegan, Horyaalka Somalia Premier league
Kulan xiiso badan oo ka tirsan horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ayaa maanta wuxuu dhexmari doonaa, kooxaha Gaadiidka iyo Heegan, iyadoo labada kooxood ay waqti ciyaareedkaan soo bandhigayaan ciyaaro wanaagsan.
Heegan ayaa waxay ka mid tahay kooxaha Sanadkan ugu ciyaarista Wanaagsan iyadoo 4tii kulan ee horyaalka ugu horreeyay Aruursatay 8 dhibcood, waxayna markan dooneysaa in ay 2 dhibcood usoo jirsato kooxaha Hoggaanka jooga ee Horseed iyo Dekadda.
Gaadiidka ayaan iyadu ku jirin waqti aad u wacan, maaddaama ay dhanka kala sarreynta horyaalka 4tii kulan ee ay ciyaartay weli ma aysan adkaan, 2 waa ay khasaartay halka Labada kalena ay Garab dhac Gashay.
Haddiise ay adkaato kulanka maanta waxay imaan doontaa 5 dhibcood, iyadoo Jeenyo lasoo fariisan doonta dhibcahaas.
Heegan Sanadkan waxay qarash badan ku bixisay soo helidda ciyaartoy Muhiim ah, waxayna suuqa ka keensatay xiddigo uu ka mid yahay Cabdicasiis Catoosh oo horyaalka ku guuleystay Sanadkii hore.
Crespo: ‘Argentina wey u baahan tahay Icardi’